MAHABO, ANKAZOABO ATSIMO, AMBAHIKILY : TSY MBOLA MAHAFOY AN’ DADA NY VAHOAKA – MyDago.com aime Madagascar
Anisan’ireo faritra mavaivay eo amin’ny lafiny tsy fandriampahalemana iny faritra Atsimon’ny Nosy toy ny ao Mahabo, Ankazoabo Atsimo,manjaka tanteraka ny asan-dahalo na atoandro na alina, ka mampikaikaika ny mponina any an-toerana izany. Nampanantena ny kandida Robinson izay natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana nandritra ny fandalovany tao amin’ireo toerana ireo androany, Alakamisy 17
oktobra nandritra ny fampielezan-kevitra notanterahany. Foanantsika ao anatin’ny enimbolana hoy Robinson ny asan-dahalo, ary ampitomboina ny isan’ny mpitandro ny filaminana isahana izany. Tsy ny lafiny fandriampahalemana ihany hoy izy no ho jerena fa ny lafiny fampianarana izay ho atao maimaim-poana ihany satria betsaka ireo zaza tsyniditra an-tsekoly nandritra izay fitondrana fatizay. Dimy taona lasa izay hoy izy , tsaroanay tsara ny nataon’ireo tsy matahotody ireo ka tonga izao ny fotoana hanakisahantsika azy ireo amin’ny alalan’ny fifidianana. Tonga aho hoy izy dokotera hitsabo ny aretina napetraky ny foza. Hafaliana no nasetrin’ny vahoaka marobe tonga nanatrika ny fampielezan-kevitra tao Mahabo, Ankazoabo Atsimo izany fandaharan’asan’ny dokotera Robinson izany. Nanotrona ny kandida Robinson hatrany moa I Neny ka dia anisan’ireo nandray fitenenana. Ankoatra ny fanentanana ny vahoaka hitondra ambavaka ny kandida Robinson dia tsy adinon’I Neny ihany koa ny nanao fanentanana ny vahoaka hifidy ny laharana faha 33, Robinson amin’ny 25 oktobra izao. Ny firaisankinantsika hoy izy no hahafahana manangana firenena vanona, ho an’ny taranaka fara amandimby. Noho izany dia tongava mifidy an’I Robinson , ilay favori Ny filoha Ravalomanana dia niditra mivantana tamin’ny antso antelefaonina avy any Afrika Atsimo. Izy moa dia miezaka hatrany miaradia amin’ny kandida Robinson sy I Neny amin’ny hetsika fampielezan-kevitra. Horakoram-pifaliana no nasetrin’ny vahoaka ny fahenoina ny feon’I Dada. Avy hatrany dia ny fanentanana ny olona ho tonga hifidy ny kandida Robinson amin’ny 25 oktobra 2013 no nanombohan’I Dada ny lahateniny. Fidio Robinson, hoyizy fa aza misalasala fa io no kandida natoltr’I Dada Ravalomanana. Tsy matahotra fifidianana izany isika fa 1eur tour dia vita io. Raha tsy mandray anjara amin’ny fifidianana isika hoy izy dia migalabona ny làlan’ny mpanongam-panjakana. Tsy maintsy miverina eto Madagasikara I Dada hoy izy fa fidio dokotera Robinson. Tsy nahafoy an’I Dada tanteraka moa ireo vahoaka na tao Mahabo, na tao Ankoazoabo Atsimo, ka dia nisy ireo latsa-dranomaso, raha vao nahareo ny efon’ny filoha Ravalomanana. Tsy mbola levona ao am-pon’ny vahoaka ny zava-bitany tany amin’ireo faritra ireo. Marihina hatrany fa misy ny fanazavana ny mahakasika ny bileta tokana amin’ireny toerana rehetra hanaovana fampilezan-kevitra ireny ho an’ny kandida Robinson. Tao Ambahikily no namaranana ny hetsika androany.
HETSIKA TAO AMBAHIKILY
HETSIKA TAO MAHABO
HETSIKA TAO ANKAZOABO
Auteur Solo Razafy*Publié le 17 octobre 2013 17 octobre 2013 Catégories Politique
6 pensées sur “MAHABO, ANKAZOABO ATSIMO, AMBAHIKILY : TSY MBOLA MAHAFOY AN’ DADA NY VAHOAKA”
Na izaho tsy izy aza latsaka ny ranomaso , very dada!!
jereo ireto ankizy maimaina kely daholo,mampalahelo.
Mankasitraka Tompoko isany ô!Zanahary anie hitahy anareo @ tsy fandriam-pahalemana.
Zava-dehibe ny fijoroanareo toy izao na dia mafy aza ny mahazo anareo koa misaotra e!!
HO TONGA ANIE NY FAHAFAHANA!!!
MILA MAILO HATRANY ISIKA FA MANDADY NY FOZA.
TSARA AMPAHAFANTARINA NY VAHOAKA FA IREO LALAM POZA KELY PAVES NATAO TATO HO ATO DIA NY FRANTSAY NO NAMATSY VOLA ARY MODY HO ATAO FANDREBIREBENA VAHOAKA IZANY AMIN NY FIFIDIANANA.
AMPIANARO FAMPIASANA NY BULLETIN UNIQUE NY OLONA FA SAO VOAMBAKA.
Mamerina ihany fa tena ilaina ny mifidy sy manaramaso ny fifidianana araka izay azo atao fa tsy maintsy hangalatra ireo foza ireo. Ary ny frantsay hanamafy izany
Hentàno ny manodidina, ny namana ary ireo fianakiavana diso lalana !
nahita ny mangidy mihaotra noho ny tamin’ny andron’i Ratsiraka (izay mbola « mibaiko » any an-tsisintsisiny any) ny vahoaka malagasy !
Tsy nanaiky hanao referendum i domelina tamin’ny 2009 satria fantany tsara fa olom-bitsy voakarama ireo teny amin’ny 13 mai ; tsy navela haneho ny heviny ihany koa ny vahoaka fa dia norahonana sy notofirina sy nodarohana « klimôzena » raha vao nanangam-peo teny an-dalana toy ny NATAONY.
Noho izany, dia fotoana izao hanehoana amin’ny rehetra, indrindra fa ny ONU, UE, UA, OIF, SADC,…. sy ny sisa, fa leo sy tofoka ny vahoaka ary ry zareo ireo no tena diso sy nanohana an’ireo mpanongana, ary tompon’andraikitra amin’izao zavatra mbola TSY AZO EKENA IZAO.
HILAINA MANDRESY AMIN’NY FIODONANA VOALOHANY NY DR ROBINSON (70% RAHA KELY INDRINDRA), MBA TSY HISIAN’NY DISADISA SY ZAVATRA HAFA AMIN’NY FIFIDIANAN SOLOMBAVAM-BAHOAKA) !!!
MILA « MAJORITE » NY MPIARO NY ARA-DALÀNA AO ANATIN’NY PARLEMANTA MANARAKA, RAHA TSY IZANY DIA HERIM-PO VERY MAINA IHANY KOA NY ATAON-TSIKA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO !!!
AAZAVAO AMIN’NY OLON-DREHETRA IZANY !! ADIDIDKO, ADIDIDNAO MAMAKY NY SORATRO, ARY ADIDIN-TSIKA REHETRA NY MAMERINA NY ARA-DALÀNA, NY FANDRIAM-PAHALEMANA ARY INDRINDRA INDRINDRA NY FIAROVANA NY FIANDRIANAM-PIRENENA !!
Tamin’ny 2002 izahay
ary au maxima no andefasana ny baffle roa
mandefa ny hira faneva!
Rehefa mande miasa isa-maraina,
saiky mande ny radio RDJ
ary maheno an’i Ony Rambelo (mpandray anjara tato @ mydago teo aloha)
androany dia resaka fahaizana manintona amin’ny alalan’ny hira:
IO VOALAZAKO IO IHANY NO MILAY
ny Andry tay isany: tsissss dikann TSY MISY VALERA
nitombo ny tanora mamo hita mivembena eny an-dalana
ary misalotra ny tee-shirt ny iray amin’ireto Hajo/Hery/Camille!!!
Mangataka mobilisation goavana alohan’ny alarobia fiafaran’ny propagandy:
amin’izay fomba rehetra azo hanaovana azy
ALEFASO MANENIKA AN’ANTANANARIVO
sy ny faritra hafa
io hira io
Précédent Article précédent : DR ROBINSON : AOKA IZAY MAHERY, MAHAY NO MANDRESY
Suivant Article suivant : HAFATRY NY FILOHA RAVALOMANANA, 17 OKT 13